ဧရာမကဏန်းကြီးတွေဖမ်းပြီး ယန်း 300 million ကိုရှာပေးခဲ့တဲ့ Speed boat !!! - JAPO Japanese News
ကြာ 12 Mar 2020, 9:48 မနက်
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ မြောက်ပိုင်းမှာ Hokkaido ထက် ပိုပြီးအပေါ်ဘက်ကျတဲ့ 北方領土 Hoppōryōdo လို့ခေါ်တဲ့ မြောက်ပိုင်းနယ်မြေတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာက စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက် ရုရှားရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုအောက်ကို ရောက်သွားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။…
အဲ့ဒီအချိန် ဂျပန်က ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအတွက် တောင်းဆိုပေမဲ့၊ ရုရှားဘက်ကဘာမှ တုံ့ပြန်မှုတွေမလုပ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီနယ်မြေက ရုရှားရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာပဲ ရှိခဲ့တာပေါ့။
အဲ့ဒီနေရာအကြောင်းကို ဆက်ပြောရရင်တော့ ငါးလုပ်ငန်းက အကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေတဲ့ နေရာဖြစ်ပြီးတော့၊ အားလုံးကလည်း ကြိုက်ကြတဲ့ ဧရာမကဏန်းတွေကိုလည်း အမြောက်အများဖမ်းမိတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဧရာမကဏန်းကြီးတွေ အမြောက်အများဖမ်းမိတယ် လို့သာဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားဖမ်းချင်လာမယ်၊ ပိုက်ဆံလည်း တော်တော်ရမယ်ဆိုတာကို စာဖတ်သူတို့လည်း နားလည်မိမှာပါ။
ဆိုဗီယက်နယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေကလည်း အရမ်းကိုတင်းကျပ်နေပြီး၊ ငါးဖမ်းသင်္ဘောမှန်သမျှကို ပစ်ခတ်၊ ဖမ်းဆီးတာ သူတို့ရဲ့ လုပ်နေကျ ထုံးစံပါပဲ။
ဂျပန်အစိုးရကလည်း အဲ့ဒါတွေကိုသတိပြုမိလာပြီး၊ ဂျပန်ဘက်လုံခြုံရေးတွေကိုလည်း တင်းကျပ်လာခဲ့ပါတယ်။
ရိုးရိုးငါးဖမ်းသင်္ဘောလေးတွေဆို ချက်ချင်းဖမ်းမိနိုင်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားအတွက်၊ speed အရမ်းမြန်မယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်ကောင်းလွတ်နိုင်မယ်ဆိုပြီး ဒီလိုအထူးထုတ်သင်္ဘောကို တီထွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
စွမ်းအင်မြင့်တဲ့ အင်ဂျင်အမြောက်အများကိုတပ်ဆင်ထားပြီး၊ မြင်းကောင်ရေ ၁၀၀၀ ထက်ကျော်တဲ့ စွမ်းအင်တွေနဲ့ ပုံစံကလည်း ပေါ့ပါးပြီး သေးငယ်တဲ့အတွက် အစောင့်တွေတောင် တော်တော်နဲ့မှ ဖမ်းမမိခဲ့ကြပါဘူး။
ပုံမှန်သင်္ဘောတွေဆို ရေနံဆီတွေသုံးပေမဲ့၊ ဒီစွမ်းအင်မြင့် အင်ဂျင်တွေမှာတော့ High octane လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ဆီတွေကိုပဲ အသုံးပြုပါတယ်။
High octane ကို ဇိမ်ခံကားတွေမှာအသုံးပြုနေသလို၊ ငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်းအနီးမှာရှိတဲ့ Nemuro လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်ကလည်း high-octane ဓါတ်ဆီရောင်းချမှုကြောင့် ဂျပန်မှာနံပါတ်တစ် ဓါတ်ဆီဆိုင်ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ ဒီအထူးထုတ်သင်္ဘောအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်မားတဲ့စွမ်းအင်နဲ့ အရှိန်ပြင်းပြင်းထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရမ်းမြန်တဲ့ ဒီသင်္ဘောဟာ မှောက်သွားဖို့အတွက်လည်း ရာခိုင်နှုန်းအရမ်းများပြီး အသက်နဲ့တောင် နီးနေသလိုပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လည်း သူဟာ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ပဲ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ယန်း 300 million လောက်ကို ရှာပေးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့် ငါးဖမ်းသမားတွေနဲ့အတူ ယာကူဇာတွေက ပူးပေါင်းပြီး အကြီးစားလုပ်ငန်းအဖြစ်ချဲ့လာကြပြီးတော့ ယန်း 10 billion အထိ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
သို့သော် ဆီဗီယက်ပြည်ထောင်စုက ပြိုကွဲသွားပြီး၊ ရုရှားဖြစ်လာတဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်မှာ ရုရှားသမ္မတ ပူတင် တက်လာပြီးတဲ့နောက်၊ နှိမ်နင်းမှုတွေကပိုပြီး ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက် ဒီအထူးထုတ်သင်္ဘောလည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကဏန်းမဟုတ်တဲ့ Cod ကော့ ဆိုတဲ့ ကားတစ်မျိုးကိုဖမ်းတဲ့ တရားမဝင်ငါးဖမ်းသင်္ဘောအပေါ် ရုရှားတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ပြီး သင်္ဘောကိုယ်ထည်ကိုပဲ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
သင်္ဘောကိုယ်ထည်မှာ အချက် ၂၀ လောက်အထိ ကျည်ရဲ့ သဲလွန်စတွေကိုတွေ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ကျည်အစစ်နဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် လူသာဆိုရင်သေမှာပါ။
ဒီအကြောင်းကိုသိပြီးတဲ့နောက် အရသာရှိတဲ့ ကဏန်းကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ဘယ်လိုစားနိုင်ပါတော့မလဲ ? ……..